Analytics, marketing amin'ny atiny, marketing amin'ny mailaka, marketing amin'ny motera fikarohana, marketing amin'ny haino aman-jery sosialy ary infografika teknolojia amin'ny Martech Zone
Inona no atao hoe Email Authentication? SPF, DKIM, ary DMARC nohazavaina
Talata, Desambra 21, 2021 Talata, Desambra 21, 2021 Douglas Karr
Rehefa miara-miasa amin'ireo mpandefa mailaka lehibe izahay na mifindra monina any amin'ny mpanome tolotra mailaka vaovao (ESP), ny fandefasana mailaka dia zava-dehibe indrindra amin'ny fikarohana ny fahombiazan'ny ezaka ara-barotra amin'ny mailaka. Efa nanakiana ny indostria aho taloha (ary mbola manohy izany aho) satria ny fahazoan-dàlana amin'ny mailaka dia eo amin'ny lafiny diso amin'ny fitoviana. Raha te-hiambina ny boaty fidiranao amin'ny SPAM ny mpamatsy tolotra aterineto (ISP), dia tokony hitantana ny fahazoan-dàlana hahazoana ireo mailaka ireo izy ireo.
Ahoana ny famolavolana tranokala, e-varotra, na rafitra loko fampiharana
Alarobia, Desambra 15, 2021 Alarobia, Desambra 15, 2021 Douglas Karr
Nizara lahatsoratra vitsivitsy momba ny maha-zava-dehibe ny loko amin'ny marika iray izahay. Ho an'ny tranonkala iray, tranokala e-varotra, na fampiharana finday na tranonkala, dia tena zava-dehibe ihany koa izany. Misy fiatraikany amin'ny loko: Ny fahatsapana voalohany amin'ny marika iray sy ny lanjany - ohatra, ny entana lafo vidy matetika dia mampiasa mainty, mena dia midika fientanentanana, sns. Fanapahan-kevitra momba ny fividianana - ny fitokisan'ny marika iray dia azo faritana amin'ny fifanoheran'ny loko. Ny loko malefaka dia mety